संक्रमितदर घट्यो, अस्पतालमा कोभिडका बिरामी पनि घटे ! अब के खुल्ला त 'मिनी लकडाउन' ? | GNN Nepal GNN Nepal संक्रमितदर घट्यो, अस्पतालमा कोभिडका बिरामी पनि घटे ! अब के खुल्ला त 'मिनी लकडाउन' ? | GNN Nepal
जेठ १७ गते, २०७८ १५:५३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । भारतमा कोरोना संक्रमितदर घटेसंगै नेपालमा पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्यामा कमी आउँदै गैरहेको छ। भारतमा गत साताबाट कोरोना सङ्क्रमण हुने सरकारी आंकडामा गिरावट भएको थियो । नेपालमा पनि सोही सातादेखि सङ्क्रमितहरू घट्न थालेका छन् । तर मृत्युदर भने दुवै देशमा चित्तबुझ्दो छैन । भारतमा दैनिक ३५ सय बढी सङ्क्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन्, नेपालमा पनि दिनहुँ सय भन्दा बढी सङ्क्रमितको मृत्यु हुँदै आइरहेको छ ।
नेपालमा हिजो अस्ति आठ हजार कोरोना सङ्क्रमित हुँदा सय बढीकै हाराहारीमा सङ्क्रमितले ज्यान गुमाउँथेँ भने अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६ हजार आसपासमा झरे पनि मृत्युको ग्राफ उतिकै सङ्ख्यामा हुने गरेको सरकारी रेकर्ड छ ।
भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान द्रुत भएकाले त्यहाँ कोरोना संक्रमणदर घट्दै गएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गर्दै आएका छन्। त्यहाँ गत १५ दिनमा ४७ प्रतिशतले संक्रमणदर घटेको छ । उही समयमा नेपालमा गत १५ दिनमा सङ्क्रमितको गति उस्तै देखिन्छ। जेठ १ देखी १५ सम्म आइपुग्दा नेपालमा १ लाख १६ सङ्क्रमित थपिएका छन् । मृत्युको सङ्ख्या २४ सय ९४ छ। तथापि जेठ १२ देखी मुलुकमा पनि कोरोना भाइरसका संक्रमितदरमा न्यून हुँदै आएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
पीसीआर परीक्षण घट्यो , सङ्क्रमित पनि कम देखिए
पिसिआर परीक्षणको दायरा घट्दै गएकाले सङ्क्रमित पनि कम भएको कतिपयले तर्क गर्दै आएका छन् ।
अघिल्लो सातासम्म २२ बढीमा पिसिआर परीक्षण हुने गरेकामा केहिदिन यता १४ हजारमा पुगेको छ । झन् शनिवार त १० हजार ९८६ जनाको मात्रै परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यति परीक्षण गरिएको मध्ये आइतबार चार हजार ३६९ जनामा मात्रै कोरोना देखिएको थियो । यदि २२ हजारकै हाराहारीमा परीक्षण गरिदों होत त्यसको अर्कै नतिजा आउने मन्त्रालयको ग्राफले बताउँछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीका अनुसार पिसिआर परीक्षण कम हुँदै गए पनि अस्ति-अस्तिको तुलनामा भन्दा केही सुधार भएको छ । तर संक्रमितदर धेरै तल भने आएको छैन। उनका अनुसार आफैं पिसीआर परीक्षण गर्न आउने कम भएकोले पनि थोरै परीक्षण देखिएको हो ।
‘केही जिल्लाका ल्याबबाट परीक्षण गरिएको रिपोर्ट समयमै नआएको हुँदा पनि अहिले सङ्क्रमित कम देखिएको हो डा. अधिकारी भन्छन् ।,
अस्पतालहरू पनि खाली
केही साता अघिसम्म अस्पतालमा बेड, अक्सिजन नपाएर छटपटाएका कथाहरू सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती छापिन्थेँ । तर अब त्यस्तो अवस्था आएको छैन । टेकु अस्पतालको आँगन खाली भएको छ । वीर अस्पताले भर्योङमा कुरुवा सुत्न छोडेका छन् । टिचिङ अस्पतालको पेटी पनि शून्य बनेको छ । यसले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्यामा गिरावट आएको प्रस्ट पार्छ । तर विशेषज्ञ भने अस्पतालमा आउँदा झन् दुख पाइने अवस्था देखेपछि सङ्क्रमितहरू घरै आइसोलेसनमा बसेको हुँदा अस्पतालमा बिरामीको चाप कम देखिएको बताउँछन् ।
तापनि अस्पतालहरू आफूले कुनै बिरामी पहिलेको जस्तो फर्काएर पठाउनु नपरेको बताउँछन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डा.अनुप बाँस्तोलाले पछिल्ला दिनहरूमा बिरामीको चाप घट्दै गएको र अस्पतालका बेड पनि खालि हुँदै गएको जनाउँछन् ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद भेटवालका अनुसार पनि आइसियु भेन्टिलेटरमा बिरामीको चाप कम हुँदै गएको छ भने अक्सिजन अभाव पनि पहिलेको हेरी टरेको छ ।
साथै गत सातासम्म भरिभराउ हुने त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आइसियु कक्षहरू पनि अहिले खाली हुन थालेको छन् । कोभिडका बिरामीहरूलाई बेडको कमी नभएको तथा अक्सिजन पनि पुग्ने मात्रामा भएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रवक्ता डा रामविक्रम अधिकारीले बताए ।
अब ‘मिनी लकडाउन’ खुल्ला त ?
देशमा कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सरकारी ग्राफ घट्दै गएको देखिन्छ । अस्पतालहरू खाली हुन थालेका छन् । मिनी लकडाउन लगाएको पनि एक महिना टेकिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कयौँ हुँदा खाने मान्छेहरू अलपत्र परिसकेका छन् । भने भर्खर उठ्दै गरेको देशको अर्थतन्त्र पनि पुनः कमजोर बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सबै लकडाउन कहिले खुल्ला भन्ने पर्खाइमा छन् ।
यद्यपि मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता अहिलै देशमा लकडाउन खोल्न नहुने भनाई राख्छन् । अहिले केही दिन कम सङ्क्रमित आए भन्दैमा निषेधाज्ञा खुलाउन हतारो गर्न नहुने उनले बताए । निषेधाज्ञा पछि मानिसले जनस्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउने हुँदा अहिलै निषेधाज्ञा खुले कोरोनाको तेस्रो चरण आउन सक्ने समेत उनले चेतावनी दिए । यो महामारी हो, लापरबाही गर्‍यो कि फैलिहाल्छ । त्यस कारण अहिले अलि थोरै दुःख गरेमा पछि जोगिन सक्ने डा. अधिकारी बताउँछन् ।
त्यस्तै रोग नियन्त्रक महाशाखामा पूर्व निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे अहिले तुरुन्तै पूर्ण निषेधाज्ञा नखुलाए पनि जनताको मर्कालाई ध्यानमा राख्दै चरणबद्धरुपमा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै लानुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन भने अब सरकारले खोपतिर ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । कोरोना भाइरसका नयाँ-नयाँ भेरियन्टले निरन्तरता पाइरहेको हुँदा हाल निषेधाज्ञा खुलाउन नसकिने बताउँदै डा. पुन भन्छन्, यो दोस्रो लहर अन्तिम लहर होइन यसैले नेपालका लागि पर्याप्त खोप खोज्न सरकार लागी पर्नुपर्छ।’
उनको पनि निषेधाज्ञा बिस्तारै योजनाबद्ध रूपमा खोल्नुपर्ने बताएका छन् ।
साथै, काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले पनि जेठ २० देखी निषेधाज्ञामा केही सहज बनाइने संकेत गरेका छन् । तथापि जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको भोलि (मंगलबार) बस्ने बैठकपछि काठमाडौंमा निषेधाज्ञा लम्ब्याउने वा खोल्ने त्यही निर्णय हुने पराजुलीले जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘निषेधाज्ञा लम्ब्याउने हाम्रो पनि मनसाय होइन, हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा विभिन्न विज्ञसंग सल्लाह गरी जिल्लाको समग्र स्थिति बुझ्दैछौं, भोलि निष्कर्ष निस्किन्छ ।’
संसद विघटनको संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने तीन दलको सहमति
नेपाल पक्षविरुद्ध ओली झनै आक्रामक